umenzi womshini we-sorter,intengo yomshini welayisi sorter
1.Ngomklamo wayo we-modular, uhla lomshini wombala we-sorter lungaphatha amandla amaningi. Ngenkathi imodyuli eyodwa ingasetshenziselwa ukusebenzisa amasampuli amaqoqo amancane wokuhlaziywa kwelebhu, kusuka phansi kuya ku- 500 kg / ihora kuze kube 20 amathani / ihora.
2.I-sorter ebonakalayo ingashintshwa kalula phakathi kwamamodi, kuhlelwe ukuhlunga okuhlukile kwelayisi futhi uyakwazi ukwenqaba ngasikhathi sinye ukukhubazeka okubonakala kakhulu, ukukhubazeka okungabonakali, nokukhubazeka kombala ofanayo.
Imininingwane yomkhiqizo womshini we-Rice sorter
Umshini we-VTXM uchungechunge lombala we-sorter ukhetha inani elikhulu lamabhizinisi asezingeni lomhlaba akhiqize ukukhanya kwe-pixel yomugqa we-CCD light, izingxenye zikagesi.Umshini wokuhlunga umbala nawo unikezwe impilo ende, ukuvumelana okuhle kwe-valve yesivinini esikhulu kakhulu,umsebenzi ozinzile nothembekile. umshini wokuhlela irayisi unokunemba okuphezulu kokukhethwa kombala womkhiqizo, ikakhulukazi irayisi eline-lesion encane kuzinhlayiya zesikhumba selayisi nelayisi elisetshenzisiwe linokukhonjwa okuhlukile nokususa amandla.Flat slideway of the product,umshini wokuhlunga imibala nawo ulungele izinhlayiya ezinkulu ekukhetheni kombala.
Ukusetshenziswa komshini we-color sorter
Ilayisi, ukolweni, ummbila, ubhontshisi, ithanga, Imbewu yelanga, i-waltnut, i-almond, quinoa, usawoti, medlar, pistachio, Ubhontshisi wezinso, Chili, Ubhontshisi obomvu, abanye.
Izinto zokumbiwa phansi
Itshe le-Quartz, Isihlabathi se-Quartz, Potassium feldspar, IBarite, Calcite, I-Limestone, Pearl, Imabula nabanye.
Imfucumfucu yokungcola, I-pellet yepulasitiki, Izingcezu zepulasitiki, Amapulangwe epulasitiki, Iplastiki yamabhodlela epulasitiki, Isikhafu sebhodlela le-PET, I-ABS Flake epulasitiki, Isikhafu sepulasitiki sePP, Ipulasitiki eyenziwe kabusha, abanye.
Isisekelo somsebenzi somshini wokuhlunga imibala
Faka izinto ku-feed ye-in-feed yomshini we-sorter,ihamba ipuleti eliqhaqhazelayo ize idlulele ku-chute eshayayo, lapho ihlolwa ngokwahluka ku-360 ° futhi ihlelwe ngamakhamera wombala we-RGB.Ukuphuma kumasiginali owamukelwe yidivaysi yamehlo, isoftware yokuhlunga imibala ilawula i-pneumatic device, ohlukanisa ngokomzimba imikhiqizo engafunekiyo kwabayifanisayo, okufinyelela ngokwemvelo i-hopper yabo ekhiphayo. Imikhiqizo enqatshelwe esikhundleni sayo iphambukiswa yindiza yomoya ocindezelweyo ekhiqizwa yi-ejector efanelekile futhi ikhishelwa ngaphambili ku-hopper. Ezinguqulweni zokwenza kabusha ngokuzenzakalelayo, umkhiqizo ohleliwe noma owenqatshelwe kufanele udluliselwe kwenye ingxenye yomshini wokuhlela irayisi ukuze uqhubeke nenqubo efanayo.
Ipharamitha yobuchwepheshe bomshini we-sorter wombala
I-VTXM1 I-VTXM2 I-VTXM3 I-VTXM4 I-VTXM5
Thatha ngaphezulu kwe-Rate (Kubi:Kuhle)
(L / imizuzu)
Ividiyo esebenzayo yomshini welayisi wombhede welayisi
Xhumana Nathi Ngomshini we-Rice sorter